Saxadoon – Saxadu waa furaha samaqabka iyo sareedada
Hordhac Fahamka caafimaadka iyo xanuunku waa muhiim waxaana haboon in laga warqabo. Ka hor intay naan bilaabin lafo gurka, gorfaynta iyo falanqaynta maaddooyinka iyo mawduucyada caafimaadka. Waxan … Read More...
Caafimaadku waa waxa ugu mudan nolosha aadanaha, waxa daliil u ah marka ay bulshadu kulanto ama iska soo hor baxaan waxa keliya ee ay is weydiiyaan waa caafimaadka. Waxa ka mid ah weydiimahaas: … Read More...
Meelo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo goobaha abaaruhu ku habsadeen ayaa la soo sheegayaa inuu ka dillaacay cudurka Daacuunku dhowaan. Aagagga qaarkood waxa la xaqiijiyey in dad ugu … Read More...
Dr. Yasin Abdi Odhaahda tifaftirka Cudurka Daacuunka, waxa ha’yadda Qaramada Midoobey u qaabbilsan caafimaadka adduunka ee World Health Organisation (WHO) ku sifaysay inuu yahay astaamaha … Read More...
Malaria is a truly global issue. It is arguably the most deadly disease in human history, and has a huge economic and social impact on the countries where it is prevalent, as has been widely … Read More...
Jaantuskani wuxu muujinayaa meelaha dhaawacma ee bukooda ka dibna caabuqa. Sidaan hore ugu soo aragnay qoraalkii ku saabsanaa farqiga u dhexeeya xanuun iyo cudur (disease and infection), waxa jira … Read More...
Dr. Yasin Abdi - August 2014 Background Africa as a continent accounts for 15% of the world’s population, yet bears 24% of the global disease burden according to World Health Organisation (WHO) … Read More